Izilwanyana kunye Nendalo Iintaka
I-Hailed for wisdom they count and cuteness kodwa ihlasekwa njengentlanzi, izinto zeenkolelo kunye nabadlayo beentlanzi ezinzima, iinqwelombazi ziye zathandana / zintlondi nabantu kubokuqala kwimbali.
Kukho iiNdidi ezimbini ezibalulekileyo ze-Owls
Ubuninzi beentlobo ezingama-200 zeebhokhwe zibizwa ngokuba ngamaqhwenga okwenyaniso, aneentloko ezinkulu kunye nobuso obunqamle, imisila emfutshane, kunye neentsiba ezinamanzi kunye neepatheni ezinamanzi. Intsalela, ukubalwa kwezinto ezincinci ngaphezu kweentlobo ezili-12, ziyi-barn eziqingqiweyo, ezinokuthi zibonakaliswe ubuso babo obufana nentliziyo, imilenze emide ifakwe iitalente ezinamandla kunye nobukhulu obulinganayo. Ngaphandle kwe-barn owl-enesabelo-jikelele esinamaqhina aqhelekileyo, ubuncinci kubahlali baseNyakatho Melika nase-Eurasia, yizona ziqhenqa zinyani.
Uninzi lwama-Owls Lubazingeli beNtshonalanga
Ukuziphendukela kwemvelo kunendlela ephumelelayo yokuhambisa izilwanyana kwiindawo ezithile: kuba ezinye iintaka ezidliwayo (njengama-hawks nee-eagles) zizingela ngemini, iinqununu ezininzi ziye zatshintsha ukuzingela ebusuku. Umbala omnyama weebhokhwe ubenza babonakale bengabonakali kwixhoba-elinezinambuzane, izilwanyana ezincinci kunye nezinye iintaka-kunye namaphiko abo zihlelwe ukuze zitshitshise. Ezi zilungelelaniso, ezidibaniswe namazwi abo amakhulu (jonga isilayidi esilandelayo), yenza izibhokhwe ezinye zezona zizingeli ezihamba phambili kwihlabathi, izimpisi kunye ne-coyotes ezingabandakanywa.
Amehlo ama-Owls azinzileyo kwiziseko zawo
Enye yezona zinto ziphawulekayo malunga neebhokhwe yindlela abahambisa ngayo iintloko zabo xa bekhangela into ethile, kunokuba bathuthukise amehlo abo kwizisekelo zabo, njengawezinye izilwanyana ezilwanyana. Isizathu salo kukuba iinqununu zifuna amehlo amakhulu, angaphambili ekuhlanganiseni ukukhanya okukhawuleza ngexesha lokuzingela ebusuku, kwaye ukuziphendukela kwemvelo kwakungenakukwazi ukukhusela i-musculature ukuvumela la mahlo ukuba ajikeleze. Esikhundleni saloo nto, iinqununu zinezikhwebu ezimangalisayo ezivumela ukuba bajike iintloko zabo ezintathu kwiesangqa, okanye i-270 degrees-xa kuthelekiswa nama-degree angama-90 kumntu ophakathi!
Unako Ukuxelela I-Lot malunga ne-Owl ngamagalelo ayo
Amaqhekeza agwinya ixhoba lawo lonke, ngaphandle kokubamba okanye ukuhlafuna. Ininzi yesilwanyana esilusizi igalelwe, kodwa iindawo ezingenakuqhekeka-njengamathambo, ubomvu kunye neentsiba-zibuyiselwa njengento enzima, ebizwa ngokuba yi "pellet", emva kweeyure ezimbalwa emva kwesidlo se-owl. Iinkcukacha zincinci, kodwa ngokuphonononga iinkcukacha zayo, abaphandi banokuchonga ngokucacileyo ukuba yintoni i-owl eyenzileyo, kwaye nini. (Iibhokhwe zamabhinqa azivelisi iipelisi, kuba abazali babo banondla ngokutya okulula, okubuyisiwe kwisidleke.)
Amaqhokazi angamaBhinqa awona mkhulu kunamadoda
Akukho mntu uyazi ukuba kutheni, ngokwemyinge, iinqununu zamabhinqa zivame ukuba zikhulu kakhulu kunabo abesilisa. Enye inkolelo kukuba abantu abancinci banesibindi, kwaye ngoko ke bafanelekile ukuba babambe amaxhoba ngelixa abantwana beselula; Enye leyo kukuba, ngenxa yokuba amabhinqa ayithandi ukushiya amaqanda ayo, adinga ubunzima bomzimba obukhulu ukuze bazinake ixesha elide bengadli. Inkolelo yesithathu ayinakwenzeka, kodwa iyamangalisa: kuba iinqununu zamabhinqa zihlala zihlasela kwaye zixotha amadoda angafaneleki ngexesha lexesha lokukhula, ubukhulu obuncinci kunye nobukhulu obukhulu bendoda bayivimbela ukuba bangalimazi.
Ama-Owls ayenjenge-Smart njengoko Ucinga
Kwiincwadi, iifilimu, kunye nemiboniso yeTV, iinqununu zihlala zibonakaliswa njengengqiqo-kodwa inyaniso kukuba akunakwenzeka ukuqeqesha i-owl, ngelixa iintaka ezinjengeentlobo, iintambo, kunye namajuba zingafundiswa ukufumana izinto kunye khumbula imisebenzi elula. Ngokwenene, abantu bacinga ukuba amaqhosha ahlakaniphile ngenxa yezizathu ezifanayo bacinga ukuba zonke iintsana ezigqoka iiglasi zihlakaniphile: amehlo amakhulu kunokuba aqhelekileyo atyhila ingqondo. (Oku akuthi kuthi iibhokhwe zisisidenge, mhlawumbi; udinga amandla amaninzi okuphengulula ebusuku!)
Iingqungquthela zingaphinde zenzeke kunye neDinosaurs
Kuye kwabonakala kunzima ukulandelela imvelaphi yokuziphendukela kwemvelo yeebhokhwe, ubuncinci bobudlelwane babo obubonakalayo kunye neenkwenkwezi zobusuku zangoku, i-falcons ne-eagles. Siyazi ukuba iintaka ezinjenge-owls ezifana neBerornorn ne-Ogygoptynx zaziphila iminyaka eyi-60 yezigidi ezedlulileyo, ngexesha le- Paleocene epoch, oku kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba iinqununu zeebhokhwe zazihlala kunye needinosaurs ekupheleni kwexesha leCretaceous . Ukuthetha ngokweengcali, amaqhwenga ngamanye amaqela amandulo endala zeentaka, aphikisana kuphela nama-gamebirds (oko kukuthi, iinkukhu, ama-turkeys kunye nama-pheasants) e- Galliformes .
Amagqabi anamaTalons anamandla kakhulu
Njengokuba kufaka iintaka ezizingelayo nokuzibulala ezincinci, iziqhophozi zixhotywe ezinye zeetalone ezinamandla kwi-avian kingdom, ezinokukwazi ukubamba kunye nokubamba izikwele, izilwanyana kunye nezinye izilwanyana ezinobuthi. Enye yeentlobo ezinkulu ze-owl, i-hillion-eyindidi enkulu yeeyundi , iyakwazi ukuguqula iitali zayo ngamandla angama-pounds angama-300 ngeeksikiti-skrey, esilingana nokuluma kunamandla kunabantu . Ezinye iibhokhwe ezinkulu ngokungaqhelekanga zinamatalitha afana nobukhulu kwiintshontshi ezinkulu, ezinokuthi uchaze ukuba kutheni ama-eagles alambileyo ngokuqhelekileyo aziyi kuhlasela ama-cousins ​​abo amancinci amakhulu.
Amaqhekeza Musa ukwenza izilwanyana ezilungileyo kakhulu
Ukuyeka eceleni into yokuba akukho mthethweni, e-US nakwamanye amazwe amaninzi, ukuba abantu abazimeleyo bazigcine njengezifuyo njengezifuywayo, kukho naziphi na izizathu zokuba kutheni le nto ingengcamango efanelekileyo. Enye into, iinqununu ziya kudla ukutya okutsha, oku kuthetha ukuba kufuneka uhlale unika iigundane, i-gerbils, imvundla, nezinye izilwanyana ezincinci; enye, imilomo kunye neethaloni zeehova zibukhali kakhulu, ngoko kuya kufuneka ugcine isitokethi esilungeleyo se-band-aids; kwaye ngokungathi zonke ezingenakwaneleyo, isikhova singaphila iminyaka engaphezu kwe-30, ngoko ke uya kunika iiglavu zakho zoshishino kunye nokufakela iigerbils kwisango layo kuze kube seminyaka ephakathi.
Ama-Owls ayenayo i-Impact of Impact on Human Culture
Imiphakathi yasendulo yayineengcamango ezahlukahlukeneyo malunga neebhokhwe. AmaGrike akhetha ama-owls ukuba amele u-Athena, unkulunkulukazi wobulumko, kodwa amaRoma ayethusa kule ntaka, ecinga ukuba ngumntu ogulayo. Ama- Aztec kunye namaMeya ayamthiya kwaye ayesaba amaqhwenga njengempawu zokufa nokutshatyalaliswa, ngelixa iintlanga ezininzi zaseMerika (kuquka iApaches neSeminoles) zatshitshisa abantwana babo ngembali yeebhokhwe ezilindile ebumnyameni ukuba zihambe nazo. AmaYiputa, awayephambi kwayo yonke impucuko, abe nombono onobubele weebhokhwe, ekholelwa ukuba ezi ntaka zikhusela imimoya yabafileyo njengoko beya ephasini.
Ilanga kwisibonakaliso sikaLeon
Imbali ya mandulo yamaRoma: Ilungelo
Iirekhodi ze-Mile World Records
Indlela yokusebenzisa i-Roller Furling
Intando yeninzi yePalamente yaseKwait
Ingqwalasela yeTheory The Labeling
I-Novena kwiNtsliziyo Eyingcwele kaYesu